Mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi n'etiti New Zealand na Borneo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi n'etiti New Zealand na Borneo
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ na -agbasa Malaysia • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Sabah na New Zealand ga-etolite otu kansụl iji kwalite njem na njem azụmahịa. Ndị ọrụ njem njem site na abụọ ga-anọdụ ala na Sabah-New Zealand Council of Tourism and Trade chọrọ ịhazi atụmatụ na ịnye gọọmentị ndụmọdụ.
Echiche ahụ bụ onye osote onye isi ala na steeti njem njem, ọdịbendị na gburugburu ebe obibi Datuk Christina Liew, na onye isi na New Zealand na Malaysia Hunter Nottage n'oge nlebara anya nke ọma na ọfịs Liew, taa. “M ga-eme ka onye isi ala (Datuk Seri Mohd Shafie Apdal) kọwaa ihe a.
Liew na Nottage kwenyere na kansụl ahụ ga-erite uru abụọ ahụ n'akụkụ nke ukwuu site na njem nlegharị anya na uto azụmaahịa. "Ọ bụ echiche ọhụrụ n'ihe gbasara nhazi na ije, mana isiokwu maka imekorita na azụmaahịa na njem bụ nke anyị mere na nwa oge," ka Nottage kwuru.
Nottage kwuru na ya ga-eziga ozi ọma na Wellington ma kpọọ onye isi ala na njem ọzọ ya ebe a. Ọnụ ọgụgụ STB na-egosi na e nwere ndị bịara njem nleta na New Zealand 3,262 na Sabah n'etiti Jenụwarị na Disemba afọ gara aga. Ọnwa isii mbụ nke afọ a dekọrọ ihe dị ka ndị njem nleta 1,256 si mba ahụ.
Ọ tụkwara aro ka a gbado anya na akara "Borneo" na mbọ iji kwalite Sabah na Sarawak.